Ambongadiny ivelany UPF 50+ Fanjonoana Masoandro miaraka amina mpamokatra sy mpamatsy vozona | , resintsika noho ny
1. Miomana amin'ny Adventure: Mitady satroka masoandro any ivelany tonga lafatra ianao mba hampiakarana ny akanjo manaitaitra anao amin'ny jono, fihazana, na dia fitobiana manaraka. Vao hitanao io. Ity satroka masoandro any ivelany ity dia azo ampiharina, afaka miaina, maivana ary mahazo aina - raha fintinina dia tokony ho izay rehetra satrony.
2. Asa ivelan'ny trano: Na mikasa ny hanjono anaty farihy ianao, na mihaza any anaty ala, na te-hiverina fotsiny ary mankafy ny eny ivelany miaraka amin'ny satroka mangatsiaka eny an-tànany, ity satroka mahafinaritra ity dia azo antoka fa hitazomana ny masoandro. ny masonao ary misoroka sunburn.
3. Kalitao Premium: Raha ny volon'ny masoandro manjono any ivelany no ilainay dia tsy mampiasa afa-tsy ny fitaovana tsara indrindra izahay, ary koa ny fizotran'ny famokarana manara-penitra sy ny fifehezana kalitao henjana.
4. Flap Fiarovana amin'ny sofina sy ny hatoka: Miaraka amin'ny sisiny midadasika, ity satroka masoandro manjono any ivelany ity dia miaraka amina flap miaro ny masoandro azo ampiharina izay afaka manarona ny lamosin'ny vozonao sy ny sofinao, ary hisorohana ireo fahasosorana sy sunburn mety tsy hijanona mivantana tara-masoandro ela loatra.
ara-nofo Pongee Fitaovana hafa mifanaraka amin'ny takian'ny mpanjifa
Size 58cm Ny hafa azo namboarina
Loko Volondavenona maivana Na namboarina
Famantarana Fanontam-pirinty, Patchwork, Embroidery fisaka, 3D Embroidery, sary famantarana matetika misy Azafady mba omeo ny sarinao na ny santionanao voalohany
Ora nanomezana 1. santionany Fotoana itarihana: 7-15 andro fiasana
fanamarihana 1. Ny fitaovana, loko, fomba ary famaritana ny ivelan'ny trano Sun Cap azo atao arakaraka ny takinao.
2. Andian-tsarimihetsika: Satroka lamaody, ivelan'ny trano Sun Cap, Satroka doka, satroka baseball, satroka miaramila, satroka harato, satrok'akanjo, satroka ririnina, satroka sifotra camouflage, satrasana nosasana, satroka mpanjono sns.
3. Mamaly anao izahay raha vantany vao voaray ny fangatahana.
★ Tongasoa ny kaomandy OEM anao momba ny volon'ny masoandro manjono any ivelany sy ny karazany hafa.
ambany dia satroka masoandro manjono ivelany any ivelany izahay, azafady mba lazao anay ny saron-doha mety indrindra na alefaso ny volonao, misaotra.
Teo aloha: Sora marika marika manokana momba ny lamaody ho an'ny mpanjono
Manaraka: Satroka fanatanjahan-tena an-kalamanjana Sun Visor ho an'ny lehilahy sy ny vehivavy